Izindaba - Izici nokuhlukaniswa kwensimbi yokusika / ukusika idiski, ububanzi bokusetshenziswa kwensimbi yokusika.
Izici nokuhlukaniswa kwensimbi yokusika / ukusika idiski, ubukhulu bokusetshenziswa kwensimbi yokusika.
Izici nokuhlukaniswa kwensimbi yokusika / ukusika idiski, ubukhulu bokusetshenziswa kwensimbi yokusika:
Empilweni yansuku zonke, uma siyinaka, imvamisa kuba nenqubo yokusika ekuhlobiseni ikhaya. Kusika phansi, insimbi, ukhuni, noma ezinye izinto ziye esimweni osifunayo. Kumkhakha wokucubungula izinsimbi, umshini wokusika wensimbi uyadingeka, kepha futhi nohlobo lomshini wokusika onekhono elinamandla okwamanje. Ama-abrasives ayo asika izingcezu. Izinto ezinolaka zezingcezu zokusika zibonisa ukuthi zingamasondo okugaya. Izingxenye zazo eziyinhloko ama-abrasives nama-binder resins. Umsebenzi wabo omkhulu ukusika insimbi ejwayelekile, insimbi engagqwali yensimbi nezinto ezingezona zensimbi ukufeza umphumela wokusika oyifunayo. Ukuma kwayo kuyishidi eliyindilinga eliyindilinga.
Izici zokusika i-blade
Ukukhethwa kwento yensimbi yokusika kunezici zayo, ikakhulukazi i-fiber fiber ne-resin. Lezi zinto ezimbili zisetshenziselwa ukwenza izinto zokuqinisa eziqinisiwe. Imikhiqizo eqediwe inekhwalithi enhle, ukuqina okuphezulu, ukumelana nomthelela namandla okugoba. Zisetshenziswa kabanzi ekukhiqizeni nasekuvalweni kwensimbi ejwayelekile, insimbi engagqwali, insimbi nengeyona insimbi. Ukukhethwa okuhle kakhulu kwezinto zokwakha nobuchwepheshe obuhle kuqinisekisa ukusebenza kahle okuphezulu kokucheka izingcezu ezintweni zokusika.
Ngokusho impahla, ahlabayo disc ikakhulu ihlukaniswe fibre resin ahlabayo izingcezu futhi idayimane ahlabayo izingcezu.
1. I-resin blade blade yenziwe nge-resin, ihlanganiswe nezinto ezahlukahlukene ezahlukahlukene. Kusetshenziswa kakhulu ku-alloy steel, insimbi engagqwali nezinye izinto zokusika ezinzima, futhi ukusebenza kwayo ukusika kubaluleke kakhulu. Lapho ukusika, kungahlukaniswa kube izinhlobo ezimbili, kufaka phakathi ukusika okomile nokusika okumanzi. Lolu hlobo lwensimbi yokusika kufanele lisebenzise ukucacisa okuzinzile. Ngaphezu kwalokho, ngokuya ngezidingo zokusika, okokusebenza nobulukhuni besiqephu sokusika kukhethiwe, okungathuthukisa kakhulu ukusebenza kahle kokusika futhi kugcine izindleko.
2. Diamond ukusika blade. Leli futhi liyithuluzi lokusika, elingabonakala njalo embonini yezokwakha, ngakho-ke lolu hlobo lwengcezu yokusika lusetshenziswa kakhulu ekusetshenzisweni kwezinto ezilukhuni neziqinile ezinjengamatshe, ukhonkolo, imigwaqo emisha nemidala, izitsha zobumba, njll. Lokhu blade diamond cutting blade ikakhulukazi yakhiwa izingxenye ezimbili: substrate kanye umsiki ikhanda. I-matrix ingxenye eyinhloko esekelayo, nayo esetshenziselwa ukubopha ikhanda lokusika, kuyilapho izinhlayiya zedayimane zisongwe ngensimbi ngaphakathi kwekhanda lokusika. Ikhanda lokusika lisetshenziswa kakhulu enqubeni yokusika, ngoba livame ukusikwa, ngakho-ke ikhanda lokusika lizosetshenziswa lisetshenziswa, kepha i-matrix ngeke ilahlekelwe. Vele, ikhanda lokusika lidlala indima ekusikeni ngoba liqukethe idayimane. IDayimane iyinto enzima kunazo zonke etholakala njengamanje. Uma ihlikihla into esidinga ukuyisika ekhanda lokusika, izoyisika leyo nto.